पैदल हिंड्न आह्वान गर्ने सहित यस्ता छन् निगमका १० प्रस्ताव
नागरिक अगुवाले भने- अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ: गगन थापा
‘सीसीटीभी फुटेज मेटाउँदैमा अर्थमन्त्री निर्दोष हुन सक्दैनन्’
‘सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने गरी निजगढमा विमानस्थल नबनाउनू’
निको हुने भन्दा नयाँ सङ्क्रमित धेरै
फेरि ओरालो लाग्यो नेप्से
स्वास्थ्यकर्मी नै चिन्दैनन् प्रसव फिस्टुला
स्वास्थ्य गोपाल दाहाल
धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान, काठमाडौंको मोडल हस्पिटल र सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र प्रसव फिस्टुलाको उपचार हुने भएपनि पहुँच नरहेका विरामी वर्षौंदेखि पीडा सहेरै बस्न बाध्य छन्।
धरानको मेयरमा हर्क साम्पाङ निर्वाचित
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन्।
धरानवासीले किन पत्याए हर्क साम्पाङलाई?
राजनीतिक दलहरूले आँखा चिम्लिएका नागरिकका समस्या र स्थानीय बेथितिलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर अभियान चलाउँदै आएका हर्क साम्पाङले धरान उपमहानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा धेरैले नसोचेको जनमत पाएका छन्।
धरानमा माओवादीको प्रदर्शन, मतगणना रोकियो धरान उपमहानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका मतपत्र भेटिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ भने मतगणना रोकिएको छ।
छिमेकीको खुशी खोसेको त्यो चुनाव छिमेकी र मिल्ने साथीबीचको सम्बन्ध बिगारिदिने त्यही चुनावका कारण हो वा अन्य कुनै कारण‚ मैले अहिलेसम्म कुनै पनि चुनावमा भोट हालेको छैन। राजनीति मन पर्छ तर राजनीतिभित्रको यो अराजनीतिक खेल कहिल्यै मन परेन।
धरान: यस पटक ‘लेफ्ट’ कि ‘राइट’? लाहुरेको शहर धरानमा यस पटकको निर्वाचनमा पनि ‘लेफ्ट’ र ‘राइट’ पक्षका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
ऊर्मि अर्थात् पूर्णबहादुर गुरुङ पुस्तकलाई आफ्नै सन्तान जसरी माया गर्छन् जसले उनलाई दिवङ्गत छोराको सम्झना गराउँछन्। भन्छन्, “यी किताबसँग खेल्दा, छोरासँगै खेलिरहे जस्तो लाग्छ।”
धरानको मेयरमा ३० भन्दा बढी दाबेदार धरान उपमहानगरको मेयरमा राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र सहित ३० जनाभन्दा बढी दाबेदार देखिएका छन्।
धरानको मेयरका लागि एमालेबाट ११ जनाको नाम सिफारिश नेकपा (एमाले) को धरान उपमहानगर कमिटीले मेयरको उम्मेदवारका लागि ११ जनाको नाम सिफारिश गरेको छ।
ठग सहकारीलाई स्थानीय सरकारबाटै संरक्षण र भरथेग विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी कसरी उनै गरीबको कमाइ लुट्ने साधन बन्दै छ? धरान उपमहानगरभित्र मौलाएको सहकारीको बेहिसाब ठगीसँगै त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका नियामक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलिभगतले यसको उत्तर दिन्छ।
किन भएको छ प्रदेश १ को नामकरणमा ढिलाइ? प्रदेश सरकार बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दल, नेता र विभिन्न संघसंस्थाको स्वार्थ बाझिँदा प्रदेश १ ले नाम पाएको छैन भने तत्काल नामकरण हुने सम्भावना पनि न्यून छ।
धरान: आफ्नै सुवाससँग बेखबर एउटा कस्तुरी शहर! कुनै बेला 'मृत शहर'को समेत उपमा पाएको पूर्वको सौम्य शहर धरान केही बौरिएको त छ तर विकासको दरिलो नेतृत्वको अभावमा होश हराएको कस्तुरीजस्तो देखिन्छ ।
मन्त्रालय फुटाएसँगै प्रदेश १ मा थपिए आठ मन्त्री प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आइतबार आठ मन्त्री थपेका छन्।
खेलाडीका सामान बाेक्न गल्फ कोर्स छिरेका शुक्र यसरी बने नेपालको नम्बर एक गल्फर खेलाडीहरूको सामान बोकेर पैसा कमाउने आशमा गल्फ कोर्स छिरेका धरानका शुक्रबहादुर राई अहिले नेपालकै नम्बर एक गल्फर बनेका छन्।
बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ।
के भइरहेको हो बीपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ?
टिप्पणी गोपाल दाहाल
बीपी प्रतिष्ठानलाई साख जोगाउनै मुश्किल हुने अवस्थामा पुर्‍याउने मुख्य कारण पदाधिकारी, व्यापारी र नेताबीचको ‘नेक्सस’ हो। यो नेक्सस नतोडेसम्म प्रतिष्ठानमा सुधार हुन असम्भव छ।
बीपी प्रतिष्ठान : अक्सिजन प्लान्टमा कमिसनको चक्कर
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको अक्सिजन प्लान्ट केहि पदाधिकारी र कर्मचारीको कमिसन खाने भाँडो बनेको छ।